Ekipa fanontana | Fitaovana maimaim-poana
Hardware Libre dia tetikasa natokana hanaparitahana ireo teknolojia Open Hardware vaovao. Betsaka ny malaza amin'ny anarana hoe Arduino, Raspberry fa ny hafa kosa tsy dia betsaka toy ny FPGA. Ao amin'ny tamba-jotra bilaogy an'ny News Blog izay miasa nanomboka ny taona 2006.
Tamin'ny taona 2018 dia mpiara-miasa amin'i Freewith iray amin'ireo hetsika Espaniola manan-danja indrindra mifandraika amin'ny hetsika Malalaka sy Misokatra, na amin'ny Hardware na Software
Ny ekipa fanontana Hardware Libre dia misy vondrona Makers, manam-pahaizana amin'ny Hardware, electronics ary teknolojia. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Teknolojia elektronika sy automatique an-trano, mahalala ny maritrano informatika lalina sy ny fandaharany avy amin'ny ambaratonga ambany indrindra, indrindra amin'ny rafitra UNIX / Linux. Izaho koa dia manana fahalalana momba ny fandaharana amin'ny fiteny KOP ho an'ny PLC, PBASIC ary Arduino ho an'ny microcontrollers, VHDL ho an'ny famaritana fitaovana ary C ho an'ny rindrambaiko. Ary miaraka am-pitiavana foana ao an-tsaiko: mianatra. Ka ny fitaovana sy rindrambaiko open source dia tonga lafatra, ahafahanao "mahita" ny atiny sy aroa amin'ireo tetikasa mahaliana ireo.
IT matihanina tena liana amin'ny tontolon'ny robotika sy ny fitaovana amin'ny ankapobeny hatramin'ny fahazazako, zavatra izay nahatonga ahy tsy hatahotra momba ny haitao farany na hanandrana ireo karazana tabilao sy drafitra izay azoko.
Izaho dia mpankafy solosaina ary indrindra Hardware Hardware. Ny farany amin'ny zavatra rehetra momba an'ity tontolo mahafinaritra ity, izay tiako hizarana izay rehetra hitako sy ianarako. Free Hardware dia tontolo mampientanentana, tsy manana ahiahy amin'izany aho.
Geek miankin-doha amin'ny teknolojia, wargames ary ny hetsiky ny mpanao. Ny fanangonana sy famongorana ireo karazana fitaovana rehetra no tiako, izay laniko mandritra ny androm-piainako, ary izay ianarako indrindra.
Tia ny karazana teknolojia rehetra ary ny mpampiasa ny karazana rafitra fiasa rehetra, ary koa ny olona iray izay tia milely amin'ny karazana fitaovana elektronika tonga eo am-pelatanako.